ဧပြီ, 2020 | Myanmar Our Daily Bread
လ - ဧပြီ 2020
အာသာဂျက်ဆင် | ဧပြီ 30
“Amistad” ရုပ်ရှင်သည် ၁၈၃၉ ခုနှစ်တွင် အာဖရိကတိုက်မှကျွန်များကို သင်္ဘောနှင့် သယ်ဆောင်လာပြီး လမ်းခုလပ်တွင် သင်္ဘောကပ္ပတိန်နှင့်သင်္ဘောသားအချို့ကို သတ်ဖြတ် သည့်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ထိုကျွန်များကို ဖမ်းမိပြီး ချုပ်နှောင်ကာ တရားစီရင်ကြသည်။ ကျွန်များ၏ ခေါင်းဆောင် Cinque' က ကျွန်များလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တရားရုံးတော်တွင် အသနားခံတောင်းဆိုသည့် မြင်ကွင်း က မမေ့ပျောက်နိုင်စရာပါ။ သံကြိုးများဖြင့် ချည်နှောင်ခံရသူသည် အင်္ဂလိပ်စကား မပြီကလာဖြင့် “ကျွန်ုပ်တို့ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါ” ဟုတစ်ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ် အသံမြှင့်၍ ကျယ်လောင်စွာအော်ဟစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် တရားရုံးတော်ကြီး ငြိမ်သက်သွားသည်။ တရားမျှတမှုအောင်နိုင်လျက် သူတို့အား လွတ်ပေးလိုက်တော့သည်။
မျက်မှောက်ခေတ်လူသားများအတွက် ရုပ်ပိုင်းချုပ်နှောင်ခံရသည့်အန္တရာယ် မရှိ တော့သော်လည်း အပြစ်၏ချည်နှောင်မှုကြောင့် ဝိညာဉ်ရေးလွတ်လပ်မှုကား ရှာလေ ဝေးနေဆဲပါ။ ယောဟန် ၈:၃၆ မှ သခင်ယေရှု၏စကားများက ကျွန်ုပ်တို့ကို သက်သာစေ ပါသည်။ “ထို့ကြောင့် သားသည် သင်တို့ကိုလွှတ်လျှင် သင်တို့သည်…
ကိုဗစ် ၁၉ နှင့် ဆာလံ ၉၁
စာရေးသူ။ ။ အဂျစ်သ် ဖါနန်ဒို(Ajith Fernando)၊ သီရိလင်္ကာ | ဘာသာပြန်သူ။ ။ ငြိမ်းသော်ထူး
မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာမူ။ ။ COVID-19 and Psalm 91
"ဆာလံ ၉၁ သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုအန္တရာယ်မှ…
ရွယ္ရီဒန္ ဗြိဳင္ေဆး | ဧပြီ 29
နေ့စဉ် ယေရုရှလင်မြို့စာတိုက်၌ ဖြန့်ဝေ၍မရသောစာများစွာကို စာလက်ခံမည့်သူဆီရောက် အောင် ပေးပို့နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများက စာရွေးကြသော်လည်း ထိုစာများစွာသည် “ဘုရားသခင် ထံ ပေးပို့သောစာ” ဟု ရေးမှတ်ထားသည့် သေတ္တာ၌သာ ရောက်သွားကြသည်။
ထောင်နှင့်ချီသောထိုစာများသည် ယေရုရှလင်သို့ နှစ်စဉ်ရောက်ရှိလာသည်။ ဘုရား သခင် (သို့) သခင်ယေရှုဟု ရိုးရှင်းစွာလိပ်မူထားကြသည်။ မည်သို့လုပ်ရမှန်းမသိသဖြင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ထိုစာများကို ယေရုရှလင် အနောက်ဘက်နံရံ၌ အခြားဆုတောင်းချက်စာရွက်များနှင့်အတူအုတ်နံရံကြားထဲသို့ ထိုးသွင်းညှပ်လိုက်သည်။ စာအများစုသည် အလုပ်၊ အိမ်ထောင်ဖက်၊ ကျန်းမာရေးအတွက် တောင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့က ခွင့်လွှတ်မှု တောင်းခံသည်။ အချို့က ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ တစ်ယောက်သောသူက ကွယ်လွန်သူဇနီးကို သတိရသဖြင့် အိမ်မက်ထဲတွင် ပြန်တွေ့လိုကြောင်း ရေးထားသည်။ ဤစာကို ဘုရားသခင် လက်ခံရရှိခဲ့သော် သူတို့ကို အဖြေပေးမည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
ဣသရေလလူမျိုးတို့သည် တောထဲလှည့်လည်ခဲ့ရစဉ် သင်ခန်းစာများစွာကို လေ့လာ သင်ယူခဲ့ကြရသည်။ သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာ သူတို့၏ဘုရားသခင်သည်…
စာရေးသူ။ ။ ဒန်နီရယ် ရိုင်ယန် ဒေး(Daniel Ryan Day)၊ USA | ဘာသာပြန်သူ။ ။ နော်မြတ်ဆုမွန်
မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာမူ။ ။ Coronavirus Pandemic: I'm afraid, and I…
သင်ဟာ မိမိအကျိုးပဲကြည့်သူလား၊ သို့မဟုတ် အများအကျိုးကြည့်သူလား
စာရေးသူ။ ။ ဂျိုအန်းနာဟော(Joanna Hor)၊ စင်ကာပူ | ဘာသာပြန်သူ။ ။ ငြိမ်းသော်ထူး
မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာမူ။ ။ Coronavirus Outbreak: Would You Be Selfish or Selfless?
၂၀၂၀ ရဲ့အစဟာ ဘာကြောင့်ဆိုးရွားစွာ စခဲ့တာလဲ။
စာရေးသူ။ ။ ချာပိုဖန်း(Chia Poh Fang)၊ စင်ကာပူ | ဘာသာပြန်သူ။ ။ ဆွေဆွေလွင်
မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာမူ။ ။ Why suchabad start to 2020?…
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် - ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရမလဲ။
စာရေးသူ။ ။ လက်စလီကိုး(Leslie Koh)၊ စင်ကာပူ | ဘာသာပြန်သူ။ ။ နော်မြတ်ဆုမွန်
မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာမူ။ ။ Wuhan Virus: Who’s To Blame?
ဒီနေ့ဒီအချိန် မြန်မာပြည်တွင် ဤမေးခွန်းများက…